POLITICS Archives » Page 2 of 62 » ZOOM Zimbabwe News
Share this:ZANU-PF secretary for information and publicity Ambassador Simon Khaya Moyo survived the bloody November 2017 coup that saw Robert Mugabe’s lieutenants being killed or exiled because his son is married Continue Reading...
Share this:NOT even the High Court ruling could take the sting out of the MDC Congress, as the day the party holds its 5th Congress is just a few hours away. MDC leader Nelson Chamisa says delegates have already started pouring in at Continue Reading...
Chief Ndiweni snubs VP Mohadi
Share this:DEFIANT Matebeleland North Chief Nhlanhlayamangwe Ndiweni will not be part of this Thursday’s meeting to be presided over by Vice President Kembo Mohadi for traditional chiefs in the province. According to a programme of the event, Continue Reading...
Share this:BUILD Zimbabwe Alliance (BZA) leader Noah Manyika says Zimbabweans are suffering because they are tolerating bad leadership, which is failing to deal with their challenges. Manyika’s statement comes as Continue Reading...
Share this:PRESIDENT Mnangagwa’s government has yet again rewarded war veterans with pieces of land countrywide, with each province instructed to set aside at least 500 hectares of land for the liberation war heroes to run Continue Reading...
Share this:Skyrocketing fuel prices are adding to the misery of Zimbabweans, already reeling from indefinite rolling power cuts imposed last week. Nelson Masaka has owned a butcher’s shop in Zimbabwe’s capital Continue Reading...
Share this:LEADER of the Movement for Democratic Change, Advocate Nelson Chamisa, say sanctions imposed on Zimbabwe by Europe and America since 2001 were not even a hindrance to Zimbabwe’s economic Continue Reading...
Share this:OPPOSITION political parties have renewed their appeal for inclusive national dialogue in the wake of the worsening economic crisis, with Nelson Chamisa’s MDC party warning of calamitous demonstrations if President Emerson Continue Reading...
Share this:By Innocent Netanyahu || Zimbabwe Partnership for Prosperity (ZIPP) partners were faced with extinction after the former party president Blessing Kasiyamhuru made disheartening and discurteous Continue Reading...